१७ चैत्र २०७६, सोमबार १३:१४
चैत्र १७ गते, सोमबार, काठमान्डौ । कोभिड -१९ का कारण सम्पुर्ण स्कुल तथा कलेजहरु चैत्रको पहिलो सातादेखी बन्द छन । एसइइ परिक्षा रोकिएको छ भने त्रिभुवन बिश्वबिद्यालयले तोकेको मितिमा परिक्षा गर्न सकेन । देशैभर शिक्षण संस्थाहरु बन्द हुँदा लाखौ बिद्यार्थीहरु घरमै ‘लक डाउन’ मा बस्नु परेको छ । कहिले खुल्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । […]
१७ चैत्र २०७६, सोमबार १०:५४
चैत्र १७ गते, सोमबार, काठमान्डौ । युबायुबती माझ बहुचर्चीत हिमालय रोडिज सिजन-३ को १८ भाग मध्य १५ भाग मात्र प्रसारण भएको थियो, कोरोना भाइरसका कारण सरकारले लक डाउन गरेपछी बाकी ३ भाग तत्काल प्रसारण नहुने भएको छ । हिमालय रोडिजको फेसबुकपेजमार्फत उक्त जानकारी दिइएको हो । आज सोमबार राती ८ बजे १६ औं भाग प्रसारण […]
१७ चैत्र २०७६, सोमबार १०:४०
चैत्र १७ गते सोमबार, काठमान्डौ । कोरोना भाइरसको सन्त्रासले कसैलाई बाकी राखेको छैन । पुर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराइ यतिबेला के गर्दै हुनुहुन्छ त ? हिमालय टिभीले खोजबिन गरेको छ । बिस्तृत जानकारी यो भिडियो रिपोर्टमा….. लकडाउनपछि डा. भट्टराईको दिनचर्या कस्तो छ ? कोरोनाको प्रभाव :लकडाउनपछि डा. भट्टराईको दिनचर्या कस्तो छ ? हामीले हिँजाेदेखि नेताहरुको […]
१७ चैत्र २०७६, सोमबार १०:०७
चैत्र १७ गते सोमबार, काठमान्डौ । शिर्ष नेताहरुको दैनिकी अहिले घर भित्रै कुंजिएको छ । देशको चिन्ता र टिका टिप्पणी गरिरहेने नेताहरु अहिले कोरोना भाइरस र सरकारले गरेको ‘लकडाउन’ का कारण घरमै बसेर सामान्य जिबनयापन गरिरहेका छन । सरकारले अर्को ८ दिन ‘लकडाउन’ गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसैबिच हिमालय टेलिभिजनले नेपाली काङ्रेसका बरीष्ठ नेता […]
१६ चैत्र २०७६, आईतवार १४:०४
चैत्र १६ गते आइतबार, काठमान्डौ । नेपालका कुनै पनी शिर्ष नेतृत्वमा कोरोना भाइरसको संक्रमण भेटिएको छैन । सेल्फ क्वारेन्टाइनका कारण शिर्ष नेताहरु घरमै ‘लकडाउन’ भएका छन भने राजनितिक भेटघाट समेत हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफु घरमै बसेर देश चलाईरहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ती दिएका छन । बिभागिय मन्त्रीहरुको दौडधुप त देखिन्छ तर सावधानी […]
१६ चैत्र २०७६, आईतवार १३:१०
चैत्र १६ गते आइतबार, काठमान्डौ । भर्खरै आइएमएफ ले डरलाग्दो प्रक्षेपण गरिसकेको छ जसले बिश्व आर्थीक मन्दीतर्फ धकेलिसकेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । कोरोना भाइरसले संसारभर आतंक फैलाईरहेको छ र यसको औषधी पत्ता लागिसकेको छैन । यो अवस्थाले प्रष्ट्याउने एउटै कुरा हो अब यो रोगको फैलावट र असर कहाँ सम्म पुग्छ एक्किन छैन । सम्पुर्ण जनता […]
बाहुबली सिमेण्टले स्यानीटाइजर र मास्क वितरण गर्ने
१६ चैत्र २०७६, आईतवार १२:५०
चैत्र १६ गते आइतबार, काठमान्डौ । हाल विश्वभर सन्त्रास फैलाएको कोरोना भाइरस–कोभिड १९ सँक्रमण हुनबाट जोगिन विश्वभर नाक मुखमास्कले ढाक्ने र हातधुने अभियान नै चलाइएको परिप्रेक्ष्यमा कम्पनीले पनि एभरेस्ट प्यारेन्टरल्स् प्रा.ली.को सहकार्यमा उक्त अभियानलाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्यका साथ सामाजिक उत्तरदायित्वको अभिभारा बहन गरेको छ । बाहुबली सिमेण्टको उत्पादक बालाजी सिमेण्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.नेपालमा अत्यधिक क्षमता युक्त […]
‘लकडाउन’ उल्लंघन गर्नेलाई कडा कारवाही हुने
१६ चैत्र २०७६, आईतवार १२:४१
चैत्र १६ गते आइतबार, काठमान्डौ । नेपाल प्रहरीले लकडाउन उल्लंघन गर्नेलाई पक्राउ गर्ने सम्बन्धी नीति परिवर्तन गरेको छ । अबदेखि विनाकारण सडकमा निस्किए भेटिएकै स्थानमा दुई घन्टा उभ्याइने भएको हो । महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय, रानीपोखरीका प्रमुख विश्वराज पोखरेलले भने, ‘हालसम्म ललितपुरबाट साढे दुई सय, भक्तपुरबाट ४० र काठमाडौंबाट गरी एक हजार ७० जनालाई होल्ड […]
२१ माघ २०७६, मंगलवार १६:०३
काठमाडौं । युनिसेफ जर्मनीका संरक्षक एल्के बुडेनबेन्डरले नेपाल भ्रमणका क्रममा यहाँका बालबालिकाको स्थिति र त्यसको दिगो समाधानका लागि युनिसेफले चालेको कदमका बारे जानकारी लिएकी छिन् । यही माघ २० देखि २४ गतेसम्म नेपाल भ्रमण गर्दै रहेका उनले ललितपुरका विद्यालय, युवा क्लब र समुदायका बालबालिकालाई भेटी तिनको दैनिक जीवनमा आउने चुनौतीको सामना गर्ने तरिका बारेमा जानकारी […]
२१ माघ २०७६, मंगलवार १५:३५
काठमाडौं । शैक्षिक गन्तव्यहरुमध्ये धेरै विद्यार्थीहरु जाने उत्कृष्ट देशअन्तर्गत युके पनि एक हो । युकेको विभिन्न सहरहरु जस्तैः लण्डनमा अध्ययनकै शिलशिलामा लाखौं नेपाली विद्यार्थीहरु रहेका छन भने हजारौं विद्यार्थीहरु ब्रीटिस डिग्री लिनको लागि युके जाने गर्दछन । पछिल्लो समय युकेमा अध्ययनको शिलशिलामा जानका लागि विद्यार्थीहरु एकदमै इच्छुक रहेका । उक्त देशका युनिभर्सिटी, कलेजमा नेपालबाट जान […]